Baarlamaanka dowlad degaanka Soomaalida oo beddelay calanka maamulkaas | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Baarlamaanka dowlad degaanka Soomaalida oo beddelay calanka maamulkaas
Baarlamaanka dowlad degaanka Soomaalida oo beddelay calanka maamulkaas
Baarlamaanka Dawlad deegaanka Soomaalida ayaa maanta ansixiyey go’aanno masiiri ah oo la hadal hayey tan iyo markii la magacaabay madaxweynaha cusub, Mustafe Muxumad Cumar (Cagjar).
Baarlamaanka oo saaka yeeshay fadhi aan caadi ahayn, ayaa waxay ku doorteen afhayeenka baarlamaanka oo loo doortay Cabdi Maxamed Aadan (Ugaas), Cabdullaahi Siciid Cumar ayaa isna loo doortay guddoomiyaha maxkamadda guud.
Xubnaha baarlamaanka waxay isku raaceen in magaca dawlad deegaanka uu noqdo Dawlad-deegaanka Soomaalida, lagana saaro Itoobiya.
Waxay kaloo isku raaceen calanka dawlad-deegaanka oo noqonaya mid xagga dambe ku leh xiddigta cad ee shanta gees leh ee ku dhex jirta midabka buluugga ah.
Calankan ayaa ahaa kii laga isticmaali jiray dawlad deegaanka, waxaase beddelay madaxweynihii hore, Cabdi Maxamuud Cumar.
Sidoo kale waxaa magaca Itoobiya laga reebay xisbiga maamula dawlad deegaanka oo hadda ka dib loogu yeeri doono Xisbiga Dimoqaraadiga Shacabka Soomaalida, dhammaan qodobbadaas ayaa lagu ansixiyey si aqlabiyad ah.